Global Voices teny Malagasy » Palestina: Fihetsiketsehana Hanoherana ny Fibodoana, Sy Ho An’ny Firaisam-Pirenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Mey 2011 17:55 GMT 1	 · Mpanoratra Betsy Fisher Nandika miora
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Israely, Palestina, Fanoherana, Fifidianana, Politika
Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nahita ny taniny sady bodoin'ireo fanorenana Jiosy sy ny rindrina fiarovana natsangan'i Israely ao Cisjordanie ireo tanàna Palestiniana ao Andrefan'i Gaza ao. Any amin'ireo tanàna tahaka an'i Nabi Saleh, Bi'lin ary Ni'lin, namaly izany tamin'ny fanatanterahana hetsika milamina isan-kerinandro ireo mponina eny an-toerana.
Nitatitra ny Foreign Policy  fa voaporofo ny maha-fanamby lehibe an'ireny hetsika ireny ho an'ny Hery Fiarovana Israely (IDF), izay nanandrana hatrany ny handrava ireo hetsika sy hisambotra ny mpanao fihetsiketsehana. Tsy nivoana tamin'izany ihany koa ny herinandro taorian'ny nanasoniavan'i Hamas sy Fatah fifanekena amin'ny fiombonany . 
Joseph Dana  dia mafana fo teraka tany New York ary manana razambe Jiosy izay nifindra tany Israely mba hitady ny fototra Jiosy niaviany, ary ankehitriny dia mafana fo mitatitra tsy tapaka sady mandray anjara amin'ireo hetsi-panoherana any amin'ireo any Cisjordanie. Nitatitra  i Dana tamin'ny takarivan'ny 5 May 2011:
Nisy fanafihana tampoka tany Nabi Saleh ny alina lasa teo. Hisy ireo fihetsiketsehina tsy mitam-piadiana rahampitso. Hitoraka bitsika mivantana mikasika ny zava-misy avy eny an-toerana aho.
Ireo fihetsiketsehana, anefa, tsy nanomboka mihitsy , nialohavan'ny firotsahan'ny IDF teny an-toerana:
Ny ankamaroan'ny mponina tao an-tanàna dia mbola tany amin'ny Moske. Naka trano roa tany nabi saleh ireo miaramila
Ny kaonty March 15th Palestine ihany koa dia nitatitra :
Nampihatra ny tsy fahazoana mivoaka ny trano izay tsy voambara ofisialy akory ny Miaramila tany #Nabi Saleh. Nandrakotra ny tanàna ny rahon'entona mandatsa-dranomaso ary natifitra avy hatrany tany amin'ireo trano. Niteraka hain-trano& faharatrana
Namoaka sary momba ireo rahon'entona mandatsa-dranomaso i Joseph Dana  :
Entona mandatsa-dranomaso tao Nabi Saleh, Palestina.
Nitatitra  i Dana fa nokendrena tamin'izany ihany koa ny vadin'ilay mafana fo voatana an-tranomaizina Bassem Tamimi :
Nidaroka ny vadin'i bassem tamimi izay naka lahatsary ho an'ny btselem ireo miaramila. Nively azy izy ireo ary nikendry ny hamotika ny kamerany tany nabi saleh.
Ora maro taty aoriana, nanambara  i Dana fa nisintaka ireo miaramila:
Vita ihany izany amin'izao fotoana izao. Arahin'ny havandran'entona mandatsa-dranomaso
Mandritra izay fotoana izay, nisy ihany koa  ireo hetsi-panoherana natao tany amin'ireo tanàna Palestiniana tany Bi'lin, Ni'lin ary Masara. Ny kaonty ofisialin'ny IDF dia nitatitra :
~mpanakorontana mahery setra 80 tany Bi'lin, ~40 tany Ni'lin nitora-bato @ herin'ny mpitandro filaminana izay nanohitra izany tamin'ny fitaovana fandravana korontna.
Hafa kosa ny voalazan'ny  PSCC (Palestinian Popular Struggle Coordination Committee):
Nisambotra tanora iray 15 taona ny miaramila nandritra ny hetsi-panoherana tany Bil'in. Mbola mampihatra ny tsy fahazoana mivoaka ny trano amin'ny fomba tsy ofisialy ihany izy ireo any Nabi Saleh.
Ary nisy ihany koa ireo hetsika  tany Ni'lin:
Mikapokapoka ny vavahady vy any Ni'ilin ireo mpanohitra ho fangatahan'izy ireo ny fahafahany miditra amin'ny taniny. Mitifitra entona mandatsa-dranomaso ny miaramila.
Tany Masara, nifarana tamin'ny fisamborana  ny ben'ny tanàna ireo hetsi-panoherana. Nitoraka tweet  i B Sez:
Mahmoud Zwahre, Voasambotra tamin'ny Hetsi-Panoherana Isan-Kerinandro ho Enti-Manohitra ny Rindrina any Al Masara http://www.imemc.org/article/61189 #Palestine #Israel
Nifamory  tany amin'ny Kianjan'i Manara ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana mba hankalazàa ny fifanekena amin'ny fiombonana tamin'ity herinandro ity manoloana ireo antoko mpifanolana Hamas sy Fatah. Ny taona taorian'ny nandresen'i Hamas tamin'ny fifidianana tany Gaza ny 2006, noroahany hiala an'i GAza ny Fatah, ary tsy dia nifandray firy intsony ireo antoko roa ireo hatramin'izay. Nanomboka ny 15 Martsa , ireo mpanohitra na izany tany Gaza, nofehezin'i Hamas, na ireo tany Cisjordanie, nofehezin'i Fatah, dia samy nanomboka nanao hetsi-panoherana mba hangatahana ny maha-tokana ny firenena. Tamin'ny voalohan'ity herinandro ity, nankalaza  ny fifanekem-pihavanana i Gaza. Ny 6 Mey, ny fihetsiketsehina tany Ramallah dia fitohizan'ireo fankalazan'ny Palestiniana ny fahalavorarian'ny hetsiky ny 15 Martsa sy ny maha-tokana ny Palestiniana.
Jalal, izay mamaritra ny tenany ho Palestiniana miaina eo anelanelan'i Jerosalema sy Ramullah, nahita ny fiandohan'ireo fihetsiketsehana, izay nanomboka teo amin'ireo mpomba ny Hamas, ary taoriana kely dia narahan'ireo mpanao fihetsiketsehana avy amin'ny hetsiky ny Fatah sy ny 15 Martsa. Nitoraka tweet  izy:
Roanjato eo ho eo ireo mpanohana ny hamas any #ramallah miandry ny hiarahan'ireo rahalahiny Fatah aminy
Nanohy  mivantana avy any amin'ny Kianjan'i Manara i Jalal:
Natsangana ireo saina maitso sy mavo amin'izao fotoana izao any Ramallah, nefa ny tena manan-danja dia ireo saina Palestiniana manerana an'i Manara! #herak #mar15
Namoaka  sary marobe momba ireo mpanao fihetsiketsehan'ny 15 Martsa i Jalal 
Tany Manara ireo mpanao fihetsiketsehina tsy hankalaza fotsiny ihany, fa nitaky fifidianana mangarahara ihany koa. Nitoraka tweet  i Ashira Ramadan:
Ao #Ramallah amin'izao fotoana izao ho fankalazana ny fiombonana ary hiantsoana fifidianana marina sy mivantana ao amin'ny PNC #Palestine #mar15
Araho ny fandrakofana mitohy ataon'ny Global Voices.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/05/15/17317/
 Nitatitra ny Foreign Policy: http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2011/04/26/when_montgomery_comes_to_nabi_saleh
 fifanekena amin'ny fiombonany: https://globalvoicesonline.org/2011/05/04/palestine-gaza-celebrates-hamasfatah-reconciliation/
 Joseph Dana: http://josephdana.com/
 Joseph Dana: https://globalvoicesonline.org/2009/07/22/israel-a-belief-in-coexistence-interview-with-activist-ibn-ezra/
 nisy ihany koa: http://english.pnn.ps/index.php?option=com_content&task=view&id=9999&Itemid=56&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
 Hafa kosa ny voalazan'ny: http://twitter.com/#!/PSCC_Palestine/status/66477259367780352
 nisy ihany koa ireo hetsika: http://twitter.com/#!/PSCC_Palestine/status/66448362450329600
 Nitoraka tweet: http://twitter.com/#!/B_sez/status/66548413579280385
 fifanekena amin'ny fiombonana : http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-13277734
 Nanomboka ny 15 Martsa: https://globalvoicesonline.org/2011/03/16/palestine-protests-for-national-unity/
 Nitoraka tweet: https://twitter.com/#!/JalalAK_jojo/status/66454051801415680
 Nitoraka tweet: http://twitter.com/#!/ash_ram/status/66488142445813760